Firefox 57 ichave hombe Bang | Linux Vakapindwa muropa
Nemashoko aya maratidziro akaita CEO weMozilla ramangwana reMozilla Firefox. Iyo Mozilla Foundation inoenderera kubheja pane yayo yewebhu browser uye akatsunga kumira kune chero munhu anenge achikwikwidza newebhusaiti. Nekudaro, Chris Beard akataura kuti chinangwa chake chinenge chiri chekubvisa Google Chrome kubva pachikuva kuita kuti Mozilla Firefox ive nhamba yekutanga webhurawuza padesktop.
Ichi ichokwadi kurwira kwehondo kurwisa Google uye Chrome, chimwe chinhu chisati chaitika kusvikira zvino.
Mozilla Firefox 57 ichave iripo rinotevera Mbudzi. Shanduro ine zvakawanda zvitsva zvinoenzaniswa neshanduro 56. Iyi vhezheni ichave yekutanga yeFirefox iyo ichave neinjini yewebhu yakasiyana, iyo Servo vhezheni iyo inopa mabasa matsva uye maficha kuFirefox. Pamwe naServo, Firefox 57 ichave neQuantum, imwe chirongwa cheiyo Sisekelo iyo ichavandudza mashandiro emifananidzo yewebhu browser. Izvi zvinhu zvitsva zvichaita kuti webhusaiti yewebhu yeMozilla iite shanduko huru kune mushandisi wekupedzisira. Asi Zvaringana here?
Chris Beard achazivisa hondo paGoogle Chrome uye Microsoft Edge neFirefox 57
Iye CEO weMozilla akataura kuti seiyi vhezheni, Webhu saiti yeMozilla inosanganisa zvinhu zvitsva zvinoverengeka zvisati zvazivikanwa uye zvichaburitswa neshanduro dzinotevera. Pakati pavo pachave nemukana wekutanga masevhisi kune mamwe marudzi evashandisi. Asi chakanyanya kukosha pamashoko aChris Beard ndiko kuziva kwekutadza kwake.
Maererano neBeard, kubudirira kweGoogle Chrome imo nekuti inopa izvo vashandisi vari kutsvaga, iyo Mozilla Firefox isina kupa. Naizvozvo, muganho wavakaisa pavari unogona kuve unokwanisika. Pari zvino Mozilla Firefox ine mamirioni zana vashandisi vanoshanda, vashandisi vanoda kuwanda nevatatu neshanduko idzi. Chiitiko chingangoita pamwe neshanduko idzi Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Firefox 57 ichave hombe Bang
Husiku husiku ini ndinongoona kuti inodya more ram
Pindura kuna Elis
Uchazviita. Firefox ndiyo yakanakisa browser, inoshandisa zvishoma pane chrome. Ivo vari kushanda kuvandudza Firefox zuva nezuva.
Iti "web browser" zvakare
Iyo nigthly vhezheni haina kugadzikana zvakadaro kuti iwe uve nezvinetso sekushandisa gondohwe. Uye ichokwadi kuti Firefox iri kuve iri nani uye iri nani. Asi chokwadi ndechekuti kuzivisa uku, kupfuura nhau, ichokwadi "kuzivisa kwehondo", sekuratidzira kwakaita vazhinji, uye ndicho chinhu chinotyisa kwazvo.
Ndatenda kwazvo nekuverenga isu uye nemaonero ako.